အစ္စရေးနှင့် ဟားမတ်စ်တို့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုအရ ဂါဇာဒေသ စစ်မီး အဆုံးသတ် - Yangon Media Group
အစ္စရေးနှင့် ဟားမတ်စ်တို့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုအရ ဂါဇာဒေသ စစ်မီး အဆုံးသတ်
ဂါဇာ၊ သြဂုတ် ၁ဝ
အစ္စရေးနှင့် ဂါဇာဒေသကို အုပ်ချုပ်နေသည့် ဟားမတ်စ်အစ္စ လာမ္မစ်အုပ်စုတို့အကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့ကြောင်း ပါလက်စတိုင်းအရာရှိနှစ်ဦးက ပြောကြားလိုက်သည်။ နှစ်ဖက်တင်းမာမှုမြင့်မားလာသည်ကို အဆုံးသတ်ရန်သဘောတူခဲ့ကြသည်။ ဤတင်းမာမှုက နှစ်ဖက်စလုံးအား စစ်ဖြစ်ပွားလာရန်ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိသည်။
သို့ရာတွင် အစ္စရေးအရာရှိတစ်ဦးက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ရသည်ဆိုခြင်းကို ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ အစ္စရေးအနေဖြင့် အကြမ်း ဖက်သမားဟု သတ်မှတ်ထားသော ဟားမက်စ်အဖွဲ့နှင့် သဘောတူညီ ချက်ရရန် ဖြစ်ခေါင့်ဖြစ်ခဲဖြစ် ကြောင်း၊ ဤအဖွဲ့နှင့် ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုတွင် စစ်ပွဲသုံးကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဒုံးပျံပစ် ခတ်မှုနှင့် အစ္စရေးလေတပ်ဗုံးကြဲမှုများ ယခင်အပတ်ကဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ကုလသမဂ္ဂနှင့် အီဂျစ်နိုင်ငံတို့က စစ်ပွဲမဖြစ်ပွားရန် ကြားဝင်စေ့စပ် ပေးခဲ့သည်။
သြဂုတ် ၈ ရက်နှင့် ၉ ရက် ကအစ္စရေးလေယာဉ်များက ဂါဇာရှိ ပစ်မှတ် ၁၅ဝ ခန့်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ဟားမတ်စ်တို့က အစ္စရေး အတွင်းပိုင်းအထိဝင်ရောက်နိုင်သည့် ဒုံးပျံများအပါအဝင် ဒုံးပျံများစွာဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ အီဂျစ်က ပဋိပက္ခရပ်ဆိုင်းရန် စေ့စပ်ပေးခဲ့သည်။ ပါလက်စတိုင်း အရာရှိက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး မှာ ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် 2045GMT တွင် စတင်မည်ဟု ပြောခဲ့သည်။
ဟားမတ်စ်တို့၏ တာဝေးပစ် ဒုံးပျံဖြင့် ပစ်ခတ်ပြီးနောက် အစ္စ ရေးလေတပ်က ချက်ချင်းဗုံးသွား ရောက်ကြဲခဲ့ရာ ဟားမတ်စ်ဌာနချုပ် အဆောက်အအုံအား လုံးပြိုကျသွားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုက သြဂုတ် ၉ ရက်ည၌ ဝန် ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ကာ အကြမ်းဖက်သမားများနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှု သဘောတူညီမှုရခဲ့၍ စစ်တပ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်ဆိုင်းရန် ပြောကြားလိုက်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။နေတန်ယာဟု၏ လုံခြုံရေး အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက စစ်မဖြစ်လိုသော်လည်း ဟားမတ်စ်တို့အား ဘယ် တော့မှအလျှော့မပေးဟု ပြောခဲ့သည်။
မွန်ပြည်နယ် အတွင်း အထူးတင်ဒါ ငါးဖမ်းပိုက်ချက် ၁၄ ချက်ရောင်းရပြီး ငွေကျပ် သိန်း ၈၉ဝဝ ကျော်ရရ
ငလျင်ဒဏ်ခံရသော အင်ဒိုနီးရှားသို့ တောင်ကိုရီးယားက ဒေါ်လာ ၅ဝဝဝဝဝ လှူမည်
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဘာနီဆန်းဒါးက ၂ဝ၂ဝ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည် ဟ??
အီရန်စစ်ရေးလေ့ကျင့်စဉ် သင်္ဘောဖျက်ဒုံးပျံကို စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ခဲ့ဟုဆို
”နိုင်ငံသား တစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးက မဲပေးနိုင်ဖို့က အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ နှစ်??
ပွဲထွက်ခွင့် အာမခံချက်ပေးနိုင်မည့် ဘန်လေအသင်းသို့ ဂျိုးဟတ် ပြောင်းရွှေ့
မြေပြဿနာကိုင်တွယ်မှု လွန်စွာအားနည်းနေသေး၊ ဥပဒေနှင့်မညီမှုကို အရေးမယူဘဲ ဝေစုယူနေသမျှ မြေယာက?